“ဘောပွဲမှာ ရန်မဖြစ်အောင်……………………….” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “ဘောပွဲမှာ ရန်မဖြစ်အောင်……………………….”
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Aug 8, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 12 comments
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက နေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်ဘော့လုံးပွဲကနေ ဖိုက်တင်ပွဲဖြစ်သွားတဲ့သတင်းလေးကို
ဖတ်ရတော့ ငယ်ငယ်က ကျုပ်တို့ကြုံခဲ့ရတဲ့ ဘော့လုံးပွဲလေးအကြောင်းကိုသွားသတိရမိသဗျာ။
အဲဒီတုံးက ကျုပ်တို့နေတဲ့ အမှတ်(၉)အထက ဒါပေမယ့် စိန်ပီတာလို့ဘဲခေါ်ကြပါတယ်။
ကျုပ်တို့ကျောင်းရဲ့မြောက်ဘက် က အမှတ်(၁၀)အများအခေါ် ဒိုင်အိုကျောင်းလဲခေါ်
အဲဒီခေတ်တွေက တစ်ကျောင်းနဲ့တစ်ကျောင်း ဘာမဆိုအပြိုင်အဆိုင်ဗျ။
ကြုံတုံးကြွားရရင် အဲဒီခေတ်က ဘင်ခရာဆိုတာ ကျုပ်တို့စိန်ပီတာကဗိုလ်ဗျာ။
ဒရေပြတဲ့ပုံစံတွေဆို အမျိုးမျိုးပြောင်း ။
ဆိုက်ဒရမ်ရိုက်တဲ့သူတွေကလဲ ဒရမ်ရိုက်တဲ့ တုတ်ချောင်းတွေကို အမျုိးမျုိုးကစားပြီးရိုက်ပြ။
ကလဲ ဘုလုံးပါတဲ့ တုတ်ကြီးကိုလေထဲမြောက်လို့မြောက်။
သွားနေရင်းကနေ တစ်ဖွဲ့လုံးစက်ရုပ်များလို တိကနဲရပ်လို့ရပ်ပြ ဆိုတော့
ကျုပ်တို့မျက်စေ့ထဲမှာတော့ အတော်ကို ကြည့်လို့ကောင်းသဗျာ။
ပြောရရင်တော့ ကျုပ်တို့ကျောင်းက လဲ နေတာထိုင်တာနည်းနည်းလေးတော့မာန်ပါသဗျာ။
အဲတော့ ကျန်နဲ့ကျောင်းတွေနဲ့ က သိပ်တော့ မတည့်ဘူးလို့ပြောရင် ရပါတယ်။
အဲနှစ် ကျုပ် ရှစ်တန်းနှစ်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ကန်ရတာ ကျုပ်တို့ကျောင်းက ကွင်းမှာကန်ကြရတာပါ။
ဟိုဘက်ကကျောင်းသားရော ကျုပ်တို့ဘက်ကျောင်းသားရော ကွင်းလုံးပြည့်ပါဘဲ။
ဆရာတွေက ကျုပ်တို့ကိုကျောင်းမဆင်းခင်အတန်းထဲမှာကတည်းက ရန်မဖြစ်ဘို့
ကိုယ့်ကျောင်းမှာလာကစားတာကို ကောင်းကောင်းဧည့်ခံဘို့မှာပါတယ်။
ကျန်တဲ့ဘောသမားတွေမမှတ်မိပေမယ့် ဂိုးဖမ်းတဲ့ကောင်ကတော့ကျုပ်တို့ ဘော်ဒါ ငကြွက်။
နောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ညိပြီး ချကြတော့တာပေါ့။
ဖြစ်ချင်တော့ ဟိုဘက်က ထုလိုက်တဲ့ခဲလုံးက ကျုပ်တို့ကျောင်းကဆရာ
(ချစ်စနိးခေါ်တဲ့နာမယ်က ဂျိမ်းစဘွန်း ရင်ဘတ်မှာအမွှေးတွေပါလို့)ကိုမှန်တော့
အဲဒီမှာပွဲက ပိုကြမ်းလာတော့ ကျုပ်တို့ဘက်ကလိုက်ရိုက်တော့ ဟိုဘက်ကကောင်တွေကထွက်ပြေးရော။
နောက်ဆုံး ကျုပ်တို့ကျောင်းအရှေ့ဘက် 84လမ်းမက ညောင်ပင်နားမှာ အဲဒီကျောင်းက
ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးအိမ်ရှိတော့ အဲ့ဒီအိမ်ကို သွားပြီးခဲ့နဲ့ထုကြတာဗျာ။
ကျုပ် တို့ကိုဖမ်းတော့တာပါဘဲ။်ဆရာတွေကောင်းတော့ အချုပ်ထဲတော့ မနေရပါဘူး ညတွင်းချင်းဘဲ အိမ်ကိုအချုပ်ကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးတာ။
အဲဒီနေ့က ဒါးတန်းဘုရားပွဲနေ့နဲ့ တနေ့ထဲဘဲထင်တာပါဘဲ။
အိမ်ရှေ့ကို အချုပ်ကားရပ်ပြီး ဆရာတွေက မိဘတွေလက်ထဲအပ်ပေးတာကိုးဗျ။
အဲဒီမှာ အိမ်က ဆက်ပြီးဆော်ပလော်တီးတော့ပါဘဲ။
နောက်ရက် ကျောင်းရောက်တော့ ဆရာကြီးဦးလှ က ကြိမ်စာထပ်ကျွေးပါတယ်။
နောက်ထပ်ရန်မဖြစ်နိုင်အောင် ကြားကွင်းဖြစ်တဲ့နန်းတွင်းကွင်း မှာကန်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။
တကယ်ကန်မယ့်ရက်လဲရောက်ရော ဘောလုံးပွဲလိုက်ကြည့်မယ်လူတွေကို စာရင်းပေးခိုင်းပါတယ်။
ခဏနေတော့ ကျုပ်တို့ကိုလိုက်ရမယ့် ဘတ်စ်ကားကြီးလဲရောက်လာပါတယ်။
ကားလဲရောက်ရော ကျုပ် တို့တန်းစီနေတဲ့ထိပ်ကို စားပွဲတစ်လုံးလာချပါလေရော။
စားစရာသောက်စရာ ဘာများဝေမလို့လဲဆိုပြီး ပျော်နေကြတာပေါ့။
ပြီးတော့ ဆရာတွေနဲ့အတူ သူနာပြုဆရာမအဖွဲ့ရောက်လာပါတယ်။.
နောက်ဆုံးတော့ ကားပေါ်မတက်ခင် ကျုပ်တို့လက်မောင်းကို ၀မ်းရောဂါကာကွယ်ဆေး
ဆေးလဲထိုးပြီးရော ကျုပ်တို့လက်မောင်းတွေ နာလဲနာ ကျဉ်လဲကျဉ်နဲ့ အဲဒီဆေးထိုး
ဆေးလဲထိုးပြီးရော ဘော့လုံးကွင်း ဆီကိုချီတက်ကြပါတော့တယ်။
ဆရာကြီးက ဂိုးတစ်ဂိုင်းသွင်းရင်တစ်ခါ ဆုချမယ်ပြောထားတော့
လက်တစ်ဖက်က နာနေတော့ လက်ခုပ်တောင်မတီးနိုင်ပါဘူး။
ပေါက်ကရပြောတယ်လို့ တော့ မထင်ပါနဲ့။
ဖိနပ်နဲ့ပစ် ရေဘူးနဲ့ပစ် ဆိုရင်
ဘယ်သူမှလဲ ပရိတ်သတ်ကို မထိန်းနိုင်မှာသေချာတယ်လေ။
အဲတော့ ကွင်းဝင်ပေါက်ကနေစောင့်ပြီး လာသမျှပရိသတ်ကို
ကဲ ကျုပ်တွေးတာ နေရာကျမကျ ၀င်ပြီး ငံပေးလိုက်ကြပါအုံးဗျာ။
လက်နှစ်ဘက် ကို ၀ါယာ ချီတဲ့ cable ties တွေ နဲ့ ချီလွှတ် (လက်ထိပ်ဆို ဈေးကြီးမှာ စိုးလို့) .. ပုဆိုး ထမိန်သမားဆိုခါးပါ တစ်ခါထဲ ကြိုး နဲ့စည်းပေးလိုက်ရင်ကောင်းမယ် .. :ha:
လွယ်လွယ်လေး ပါ အီးကယ်ဂျန်ရယ်
ထူးဆန်းပါပေ့ ဆပေါက် ရယ် (မှတ်ချက်။ ။ ဗိုက်ကလေး လေသံဖြင့် ဖတ်ရန်)
ဦးပေါက် အကြံ ဂွတ်တယ်။ ဌက္ကထ ကြီး ဆေးထိုးပေးပါဗျို့
ထိုးမယ့်လို့သာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်ရင် တရုပ်ပြည်ကနေ အမြန်သွင်းမယ်ဗျာ
ကြံဖန်တွေးတတ်တဲ့ ကျောင်းအုပ်ကြီးတွေကိုတော့ ချီးကျူးပါသဗျာ
တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ် ကိုပေါက်တို့လည်းကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုး
မြန်မာ့စိတ်ရင်း မြန်မာ့ရှု့ခင်းကို ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က လူတွေ တွေ့မြင်သွားရမှာပေ့ါ ကိုပေါက်ရယ်။
အဲဒီ ဆီးဂိမ်းစ်မှာ မြန်မာပရိသတ် သောင်းကျန်းမှာ စိုးတဲ့အကြောင်းဆိုလို့ ပြောရဦးမယ်။ တခြားပွဲတွေမှာ ရိုက်ပွဲတွေ ဆဲတာတွေ ခုံနဲ့ပစ်တာတွေ ဘယ်လိုဖြစ်ကြသလဲတော့ မသိဘူး။
အဲဒီကိစ္စဟာ မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အသင်းကြီး ကန်တဲ့ပွဲတွေမှာ ဖြစ်လာတာ မကြာသေးဘူး။ တကယ်ပြောတာ။ ကျနော် သေသေချာချာ မှတ်မိတယ်။ ဟိုတုန်းကဆို မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အသင်း ကန်တဲ့ပွဲတွေကို မလွတ်တမ်း အားပေးပြီး နိုင်လိုက်လို့ကတော့ နောက်တနေ့ထုတ် ဂျာနယ်တွေ သတင်းစာတွေမှာ နိုင်လိုက်တဲ့အကြောင်း ပြန်ရေးတာကို ကျနော်က ပြန်ပြန်ဖတ်ပြီး စားမြုံ့ပြန်သေးတာ။
ဟိုတုန်းက မျိုးလှိုင်ဝင်းတို့ သန်းတိုးအောင်တို့ ကြည်လွင်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ကန်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာ အဲဒါမျိုး စည်းပျက်ကမ်းပျက် ဖြစ်တာ တခါမှ မတွေ့ဖူးဘူး။ နောက်ပြီး မျိုးလှိုင်ဝင်း ဝင်းအောင်တို့ ဘဏ္ဍာအခွန် အသင်းနဲ့ အတူတူ အာရှကလပ် ချန်ပီယံပွဲတွေ ကန်တော့လည်း အဲဒါမျိုး လုံးဝ မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အဲဒီတုန်းက ကျနော် မှတ်မိတယ်။ ဘဏ္ဍာအခွန်က သီရိလကာင်္က ဆောင်းဒါးနဲ့ ဗီယက်နမ်က ဒေါင်သက်ကို နိုင်ပြီး ကွာတားဖိုင်နယ် တတ်သွားတာ။ အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်တွေမှာ ပရိသတ် လုံးဝ မသောင်းကျန်းခဲ့ဘူး။ လူကလည်း များသလား မမေးနဲ့။ သုဝဏ္ဏဝင်း လေးဘက်လေးတန်ကို မဲမှောင်နေတာပဲ။ ပြိုင်ဘက်အသင်းက ဂိုးသွင်းလိုက်လည်း ပရိသတ်က ငြိမ်ကျသွားတာပဲ ရှိတယ်။ လုံးဝ မဆူပူခဲ့ဘူး။ အဲဒီတုန်းက အိမ်ကွင်းမှာ မြန်မာ့လက်ရွေးစင် သန်းဝေ တိုက်ရိုက်အနီကတ်နဲ့ ထွက်ရတာလည်း ပရိသတ်က ငြိမ်သွားတာပဲရှိပြီး လုံးဝမသောင်းကျန်းဘူး။
အဲဒီတုန်းက ဆောင်းဒါးနည်းပြကတောင် သူလည်း နိုင်ငံတကာမှာ ကလပ်အသင်းကို အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေ ရှိတာ မြင်ဖူးပေမယ့် ဒီမြန်မာ ပရိသတ်လို ဘဏ္ဍာအခွန် ကလပ်အသင်းကို မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အသင်းကြီးလို အားပေးတဲ့ ပရိသတ်ကို မတွေးဖူးဘူး ဆိုပြီးတောင် ပြောသွားသေးတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်း စိုးမြတ်မင်းတို့ တတ်လာပြီး အာရှလူငယ် ခြေစစ်ပွဲကို မြန်မာအိမ်ကွင်းမှာ ကန်ရတော့လည်း ပရိသတ်က တခဲနက်ပဲ အားပေးကြတာ။ အဲဒီတုန်းကလည်း သေသေချာချာ မှတ်မိတယ်။ ဂျပန်နဲ့ မြန်မာ အုပ်စုဗိုလ် နောက်ဆုံးပွဲမှာ လုကြတာ။ ပထမပိုင်းမှာ မြန်မာက တဂိုးသွင်းထားတယ်။ ဒုတိယပိုင်းလည်း ရောက်ရော ဂျပန်က ချေပဂိုးလည်း ပြန်သွင်းလိုက်ရော မြန်မာပရိသတ်ဟာ မီးကို ရေနဲ့ သတ်လိုက်သလို ငြိမ်သွားတော့တာပဲ။ ဒါပေမယ့် အော်ဆဲတာတို့ တွေ့ကရာနဲ့ ပစ်တာတို့ လုံးဝမလုပ်ဘူး။ ပွဲပြီးတော့ ဂျပန်နိုင်သွားလို့ မြန်မာလူငယ်တွေရော ပရိသတ်ရော မိုးရေထဲမှာ ငိုပြီး ပြန်သွားကြတာ မှတ်မိသေးတယ်။
စပျက်တာက ကျနော်မှတ်မိသလောက် မျိုးမင်းထွန်းတို့ အဖွဲ့ အာဆီယံလူငယ်ပွဲကို မြန်မာပြည်မှာ အိမ်ရှင်လုပ်ပြီး ကန်ရာက စတာပဲ။ အဲဒီတုန်းက ကျနော်လည်း သွားကြည့်သေးတယ်။ ထိုင်းတဲ့ ကန်တဲ့ပွဲမှာ ကွင်းထဲကို ဘယ်ကလူတွေလည်း မသိဘူး။ ကွင်းပြည့်လို့ လုံခြုံရေးက တံခါးပိတ်ထားတာကို သံတုတ်တွေနဲ့ ပြေးလာကြတာ။ လုံခြုံရေးကလည်း ကြောက်ပြီး ဖွင့်ပေးလိုက်ရတယ်။ အဲဒီမှာ ပွဲကြည့်စင်ပေါ်တင် မကတော့ပဲ ဘေးအစွန် ပြေးလမ်းတွေအထိ ရောက်လာလို့ ပွဲက တော်တော်နဲ့ မစနိုင်ဘူး။ နောက်တော့ ပွဲလည်း စရော လီးပဲဆိုပြီး သီချင်းတိုက်သလို အဖွဲ့လိုက် အော်ဆိုတော့တာပဲ။ မြန်မာ့အသံက အသံလွှင့်တာတောင် အဲဒီအသံကြီးဟာ တီဗီမှာ ဟိန်းထနေတာပဲ။ ကြားတာတော့ တကယ့် ရပ်ကွက်ထဲက အပေအတေတွေ ရောက်လာတာပေါ့။
အဲဒီနောက်ပိုင်း တောက်လျှောက် ပျက်တော့တာပဲ။ မကောင်းတာက ဓါတ်ကူးဖို့ လွယ်တယ်လေ။ အခုတော့ ကုစားလို့တောင် မရတဲ့အဆင့် ဖြစ်နေပြီ။
မြန်မာ့အားဂဇား ဂဘာကို လွှမ်းရမည် ဆိုတဲ့ ဇဂါး အတိုင်းးး
လွှမ်းတော့ လွှမ်းမှာ ပါပဲ
အဆိုးကျော်တဲ့ သတင်းနဲ့လွှမ်းသွားမယ့် အရေးးးး
Facebook ထဲ က တွေ့လို့ သဘောကျလွန်းလို့ မျှပါတယ်။
စာပိုင်ရှင်က ညီသစ် တဲ့။
နေပြည်တော်နဲ့ ရန်ကုန် ဘောလုံးပွဲ နှစ်ဖက် အသင်းပရိတ်သတ်တွေ ရန်ဖြစ်တော့
အမိမြန်မာပြည်ကြီးအတွက် တော်တော် ၀မ်းသာမိပါတယ်…
ကျူပ်တို့ ဗမာတွေဟာ အခြေခံအားဖြင့်တော့
လူမျိုးဘာသာ ခွဲခြားတတ်တဲ့ စိတ် မရှိဘူးဆိုတာကို တွေ့လိုက်ရလို့ပါ…
ဘာသာခြား နဲ့ ချ ယုံတင် မကပဲ.
လိုအပ်ရင်..အချင်းချင်းလည်း ချ ပါတယ်ဆိုတာ
ဒါဟာ ခွဲခွဲခြားခြား စိတ် သိပ်မရှိဘူးဆိုတာကို ပြတဲ့
အကောင်းလက္ခဏာဆောင်သော အကျင့်စရိုက်ကလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ဝေးဝေးလံလံ လက်ပက်တောင်းတောင်ထိ ပို့ထားပေးတဲ့
နိုင်ငံတော် အစိုးရကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိရပါတယ်… ဟဲဟဲဟဲ…အဟွတ်..
တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ပွဲထိန်းနည်းပါလားလေးပေါက်ရေ။ အခုမှပဲကြားဖူးတော့တယ်။ ဘာမှကိုလုပ်မရတော့ ဘူးပေါ့။ အခုလဲအဲလိုပွဲထိန်းနည်းတော့လိုပီထင်တယ်နော်။ အကောင်းဆုံးကတော့ အားလုံးကိုလက်ထိပ် ခတ်ပေးထားလိုက်ရင်ကောဘယ်လိုလဲလေးပေါက်။
ဒါမှ ဒိုင်အိုနဲ့ စိန့်ပီတာ ပီသတော့မပေါ့
အဲဒီလိုသာ မထိန်းရင် နောက်တစ်ပွဲ ဆက်ဖြစ်မှာ သေချာသကိုး
ကျောင်းသားများရဲ့ မျိုးချစ်စိတ် ပြင်းပုံ ပြောပါတယ်…